कसरी पायो ‘कुटुमा कुटु’ले पाँच करोड भ्युज ?
महेश काफ्ले | प्रकाशित: 2074, फाल्गुन 15, मंगलबार
युट्युब भ्युजलाई मानक मान्ने हो भने चलचित्र ‘२ रुपैयाँ’ को ‘कुटुमा कुटु’ बोलको गीत नेपाली सङ्गीत तथा चलचित्र क्षेत्रकै अहिले सम्मको सफल गीत हो । के यो गीत नेपाली सङ्गीत तथा चलचित्र क्षेत्रले पाएको अहिले सम्मकै उत्कृष्ट सिर्जना हो त ? कम्तीमा मेरो लागी चाहिँ यस्तो पक्कै हैन तर गीतले सफलता र चर्चाको एउटा लोभ लाग्दो कोसेढुंगा खडा गरी सकेको छ । हालसालै मात्र युट्युबमा पाँच करोड भन्दा बढी भ्युज पाउने पहिलो नेपाली गीत बनेको यो गीतले यो लेख तयार पार्दा सम्म एघार हजार भन्दा बढी कमेन्ट, एक लाख बैसठ्ठी हजार भन्दा बढी लाइक र चौबिस हजार भन्दा बढी डिसलाइक प्राप्त गरेको छ । गीतको भ्युज सङ्ख्या अहिलेपनी खरायो गतिमा दौडि रहेकाले यसले निकट भबिष्यमानै अरू थप किर्तिमान कायम गर्ने पक्का छ । राजनराज शिवाकोटीको शब्द तथा सङ्गीतमा तयार भएको गीत राजनराज शिवाकोटी, मेलिना राई र राजन इसानले गाएका छन् । सङ्गीत संयोजन राजन इसानले गरेको गीतको ध्वनि मिश्रण श्यामश्वेत रसाईलीले गरेका हुन् । हाइलाइट्स नेपालको युट्युब च्यानलबाट अपलोड भएको गीतको भिडियोमा आसिफ शाह, निश्चल बस्नेत, स्वस्तिमा खड्का, बुद्धि तामाङ लगायतका कलाकारहरूले कम्मर मर्काएका छन् । यस्तै, कोरियोग्राफी कविराज गहतराजले गरेका हुन् भने चलचित्रको निर्देशक असीम शाह रहेका छन् । तिन करोड जनसङ्ख्या रहेको देशमा गीतले पाँच करोडको भ्युज पाउनु आफमा गौरवको विषय हो । हुन त कुनै पनि एउटा सिर्जना सफल हुनलाई त्यसका सबै पक्षहरू उत्तिकै सबल हुनु पर्छ । तर पनि केही यस्ता कारणहरू छन् जसले गर्दा ‘कुटुमा कुटु’ युट्युबमा पाँच करोड भन्दा बढी पटक हेरी सकिएको छ ।
गीतको बलियो पक्ष मध्यको एउटा प्रमुख पक्ष यसमा समावेश शब्दहरू हुन् । बोली चालिका ठेट शब्द तथा टुक्काहरुलाइ राजनराज शिवाकोटीले जुन किसिमले बुनेका छन् ती शब्दहरू जनमानसको जिब्रोमा सजिलै झुण्डिन पुगेका छन् ।
सरल लोक लय
गीतको अर्को बलियो पक्ष भनेको यसमा समावेश सरल लोक लय हो । सङ्गीतकार राजनराज शिवाकोटीले आफ्नो शैलीमा काँठ क्षेत्रको लोक लयलाई सुन्दर रूपमा फ्युजन गरेका छन् । सङ्गीतको प्राविधिक हिसाबले पनि सरल गीत जो कोहीले सजिलै गुन गुनाउन सक्छन् ।
मेलिना राईको गायकी
मेलिना राईको उत्कृष्ट गायकीले गीतमा सुनमा सुगन्ध भरेको छ । मेलिनाको स्वर गीतमा मात्र सुहाएको छैन भिडियोमा स्वस्तिमा खड्कालाई पनि अत्यन्तै सुहाएको छ । यस्तै, राजनराज शिवाकोटी र राजन इसानले पनि गीतलाई भाव अनुरूप न्यायपुर्ण तरिकाले गाएका छन् ।
निश्चल र स्वस्तिमाको जोडी
निश्चल बस्नेत वर्तमान नेपाली चलचित्र क्षेत्रको सबै भन्दा रुचाइएका निर्देशक हुन् । निर्देशकका रूपमा मात्र हैन अभिनेता र गायकका रुपमापनी दर्शकले उनलाई निकै माया गरेका छन् । उता, स्वस्तिमा खड्का पछिल्लो समयको चर्चित नायिका हुन् । नेपाली युवाहरूले निकै रुचाएका स्वस्तिमाको प्रशंशकहरुको जमातपनी उत्तिकै ठुलो छ । नाताले श्रीमान् श्रीमती रहेका यो जोडीलाई राष्ट्रिय दाजु भाउजूको रूपमा सामाजिक सञ्जालहरूमा प्रस्तुत गरिँदै आएको छ । दर्शकले अत्यधिक रुचाएको जोडीले कम्मर मर्काउनालेपनी यो गीतको भिडियोले बेग्लै उचाइ पाएको हो ।
२ रुपैयाँको गीत
भिजे, गायक तथा निर्देशक आसिफ शाह दर्शकहरूलाई चिनाइ राख्नु पर्ने नाम होइन । ‘कर्कश’ बाट चलचित्र निर्देशकका रूपमा डेब्यु गरेका आसिफको नायकको रूपमा ‘२ रुपैयाँ’ डेब्यु चलचित्र थियो । यस्तै, मिडिया इन्डष्ट्रिमा डेढ दशक भन्दा लामो समय बिताइ सकेका आसिफका सहोदर भाइ असीम शाहको निर्देशकका रूपमा पहिलो चलचित्र हुनुको नाताले पनि सुरु देखिनै ‘२ रुपैयाँ’ ले एक किसिमको चर्चा पाइ सकेको थियो । अझ त्यसमा निश्चल बस्नेतको पनि नाम जोडिएसँगै दर्शकहरूमाझ चलचित्र बहुप्रतिक्षित बन्न पुग्यो । यो उचाइ र चर्चाको प्रत्यक्ष फाइदा कुटुमा कुटु सुपारी दाना गीतलाई पुग्न गयो । यति ठुला नामहरू र ब्यानरको चलचित्रको गीतको रूपमा यसले बेग्लै स्थान प्राप्त ग¥यो ।
र अन्त्यमा, माथि उल्लेख गरेजस्तै कुनै पनि सिर्जना सफल हुन त्यसका सम्पूर्ण पक्षहरू सबल हुनै पर्छ । यसअर्थ कुटुमा कुटु गीतका सम्पूर्ण पक्षहरू सबल अनि उत्कृष्ट भएर नै दर्शक श्रोताले गीतलाई यति धेरै मन पराएका छन् । गीतको यो सफलतामा आज ती सम्बन्धित सम्पूर्ण पात्र र पक्षहरू बधाईका हकदार छन् । सबैलाई बधाई तथा शुभकामना !